Translations < Myanmar (Burmese) < 5.1.x - Development < GlotPress — WordPress
Translation of 5.1.x - Development: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (3,443) • Untranslated (1,756) • Waiting (236) • Fuzzy (17) • Warnings (2)
No plugins found. Tryadifferent search.	 မီဒီယာမတွေ့ပါ။ အခြားရှာဖွေမှုထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။	 Details
2014-09-01 16:07:25 GMT
The login page will open inanew tab. After logging in you can close it and return to this page.	 ဝင်ရောက်ရန် စာမျက်နှာကို ဝင်းဒိုးအသစ်တွင် ဖွင့်ပေးပါမည်။ ဝင်ပြီးသောအခါ ထိုစာမျက်နှာအား ပိတ်ပြီး ဒီစာမျက်နှာသို့ ပြန်လာနိုင်ပါသည်။	 Details
ဝင်ရောက်ရန် စာမျက်နှာကို ဝင်းဒိုးအသစ်တွင် ဖွင့်ပေးပါမည်။ ဝင်ပြီးသောအခါ ထိုစာမျက်နှာအား ပိတ်ပြီး ဒီစာမျက်နှာသို့ ပြန်လာနိုင်ပါသည်။
2014-09-01 10:44:34 GMT
Sorry, you are not allowed to delete this category.	 ဒီစာမူကို သင်ဖျက်ခွင့်မရှိပါ။	 Details
2014-09-01 10:44:37 GMT
Sorry, you are not allowed to view this item.	 ဒီစာမူကို တွဲချိတ်ဖော်ပြရန် သင့်ကို ခွင့်မပြုပါ။	 Details
ဒီစာမူကို တွဲချိတ်ဖော်ပြရန် သင့်ကို ခွင့်မပြုပါ။
2014-09-01 10:44:38 GMT
%1$s is your new site. <a href="%2$s">Log in</a> as &#8220;%3$s&#8221; using your existing password.	 <a href="http://%1$s">http://%2$s</a>မှာ သင့်ဆိုဒ်အသစ်ဖြစ်သည်။ &#8220;%4$s&#8221; အဖြစ် သင့် လက်ရှိ စကားဝှက်ကို သုံး၍ <a href="%3$s">ဝင်ပါ</a>။	 Details
<a href="http://%1$s">http://%2$s</a>မှာ သင့်ဆိုဒ်အသစ်ဖြစ်သည်။ &#8220;%4$s&#8221; အဖြစ် သင့် လက်ရှိ စကားဝှက်ကို သုံး၍ <a href="%3$s">ဝင်ပါ</a>။
2014-09-06 08:39:06 GMT
Words	 စကားလံုးများ :	 Details
2011-05-29 16:06:28 GMT
%1$s and %2$s	 %1$s နှင့် %2$s။	 Details
%1$s နှင့် %2$s။
2014-09-01 10:44:42 GMT
Sorry, you are not allowed to access details about this site.	 ဤဆိုဒ်အ‌ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်များအား ရယူသုံးစွဲရန် သင့်အားခွင့်မပြုပါ။	 Details
ဤဆိုဒ်အ‌ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်များအား ရယူသုံးစွဲရန် သင့်အားခွင့်မပြုပါ။
To activate your blog, please click the following link:↵ ↵ %1$s↵ ↵ After you activate, you will receive *another email* with your login.↵ ↵ After you activate, you can visit your site here:↵ ↵ %2$s	 သင့် ဘလော့ဂ်အား အသက်သွင်းရန် အောက်ပါ ချိတ်ဆက်လိပ်စာကို နှိပ်ပါ - %s အသက်သွင်းပြီးလျှင် သင့်အတွက် ဝင်ရောက်ရန် အချက်အလက်များနှင့် *နောက်ထပ် အီးမေးလ်တစ်ခု* ကို လက်ခံ ရရှိပါလိမ့်မည်။ အသက်သွင်းပြီးလျှင် သင့်ဆိုဒ်ကို ဒီမှာ သွားရောက် လည်ပတ် နိုင်ပါသည် - %s	 Details
2014-11-27 13:45:35 GMT
Sorry, you are not allowed to access details of this post.	 သင့်အား ပို့စ်၏ အချက်အလက်များ ရယူခွင့် မပြုပါ	 Details
သင့်အား ပို့စ်၏ အချက်အလက်များ ရယူခွင့် မပြုပါ
2015-12-21 16:40:03 GMT
Suggestion:	 အြကံြပုချက်များ	 Details
2011-03-15 03:56:21 GMT
Font Size	 စာ​လံုး​ ​အ​ရွယ်​အ​စား	 Details
ordered list	 စီစဉ်ထားေသာ စာရင်း	 Details
2011-03-15 03:56:22 GMT
Name:	 အမည်ေပးထားေသာ	 Details
2011-03-15 03:56:23 GMT